ANDILAMENA : Mpanafika taksimoto iray maty voatifitra, valo azo sambo-belona
Mirongatra ny fanafihana mahazo ireo mpanao taxi-moto ao anatin’ny Distrikan’Andilamena. 18 février 2021
Saika mampiasa izany avokoa, hatao fitaovam-pitanterana ny ankamaroan’ny mponina ka anisany mampiroborobo ny asa ratsin’ireo olon-dratsy.
Ny faran’ny herinandro teo tratran’ny patsa iray tsy omby vava ireto mpanao asa ratsy. Andian-jiolahy mpanafika taxi-moto no nifanehitra tamin’ny mpitandro filaminana ka tsy nisy afa-bela. Izay tsy maty voatifitra azo sambo-belona. Fantatra fa taxi-moto iray no nisy nandroba tao amin’ny Fokontany Ampamoizamaso, eo an-tampon-tanànan’Andilamena, ny faran’ny herinandro teo.
Nisy teo amin’ny folo lahy teo ireo mpanafika ka rehefa tratran’ny be noho ny vitsy ilay voaroba dia tsy sahy nanohitra. Taorian’ny voina nihatra taminy dia nampandre ny Zandary ny tenany. Ireto farany avy hatrany dia nanao ny fikarohana ka tao Anony, anatin’ny Kaominina Vohimena sy tao Fiadanana anatin’ny kaominina Amparafaravola no tra-tehaka ireto tompon’antoka.
Raikitra ny fisamborana, sivy lahy no voasambotra izay mbola nikasa hitsoaka ihany raha iny teny an-dalana hihazo an’Andilamena iny. Tsy maintsy nampiasa basy ny Zandary vokatr’izany ka maty voatifitra ny raikalahy tamin’izy ireo. Ny ambiny kosa efa voatazona ao amin’ny biraon’ny Zandary. Mahatsiaro ho afa-doza ireo mpanao taxi-moto tamin’ny faharavan’ity tambajotra iray ity.
Mampitandrina noho ireo salama misy Covid ny talen’ny Fahasalamana FIHENAN’NY MARARY AO MAHAJANGA (1795) 11 mai 2021 ALAKAMISY 6 MAY - ALAROBIA 12 MAY 20121 (738) 10 mai 2021 “Môtô halatra no atakalo rongony mahery vaika” FIDOROHANA TAFAHOATRA (50) 11 mai 2021 Mampisavoritaka ny amboletran’ i Raoul Rabekoto KITRA MALAGASY (46) 11 mai 2021 Tsy ampy 3 000m3 isan’andro ny rano tsinjarain’ny Jirama TANANAN’I MAHAJANGA (37) 11 mai 2021 Tsaboina sy toroana hevitra any an-trano ireo mararin’ny Covid – 19 « COUP DE POING » (36) 11 mai 2021